အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple Pay ကို: လိမ်လည်သူများကိုအဘို့အသစ်တစ်ခုနယ်စပ်” ချားလ်စ်အာသာကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္လာနေ့ 2nd မတ်လအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
မကြာခဏ Apple Store ကနေ - - US မှာရာဇဝတ်ကောင်သစ်ကို Apple က high-တန်ဖိုးကိုကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ခြင်းငှါမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ငွေပေးချေအသုံးပြုနေသည်ခိုးယူအထောက်အထားတွေကိုနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူ.
ဘဏ်များလိမ်လည်မှု၏အဆင့်အားဖြင့်အံ့သြဖမ်းမိခဲ့ကြ, နှင့်ဂါးဒီးယန်းအချို့သောပိုကောင်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်များကိုထိန်းချုပ်ထဲက run နေပြဿနာကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရာအရပျ၌ထားကြသည်ကိုသေချာစေရန်ဆက်ပြောဖြစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်သည်, ရှိပြီးသား system ကိုသုံးပြီးပတ်ပတ်လည်နှစ်ဦးသန်းအမေရိကန်များနှင့်အတူ.
အဆိုပါလူလိမ် Apple Pay ကိုရဲ့လက်ဗွေရာ-activated ကြိုးမဲ့ငွေပေးချေမှုယန္တရားပတ်လည်လုံခြုံတဲ့စာဝှက်စနစ်ကိုချိုးဖဲ့ကြပြီမဟုတ်. အစား, သူတို့ခိုးယူပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ iPhone သစ်ကိုတက် setting နေကြတယ်, ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုဖုန်းပေါ်မှာ "ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို" သားကောင်ရဲ့ကဒ်ဘဏ်များတောင်းဆို.
သူတို့က Apple Pay ကိုလကျခံပါနဲ့ high-တန်ဖိုးကိုပစ္စည်းများဆက်ကပ်နှစ်ခုစလုံးကြောင့်ခိုးယူ၏ ID နှင့်အတူပြစ်မှုကျူးလွန်သူအထူးသဖြင့် Apple Store ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်, သောထို့နောက်ငွေသားအဘို့ရောင်းချနိုင်ပါတယ်.
၎င်း၏ဖုန်းပေါ်မှာသိမ်းထားဖို့ကဒ်ကအသေးစိတ်တစ်ခုစာဝှက်ထားတဲ့ဗားရှင်းကျော်ဘဏ်ထုပ်ထုတ်ပေးသောအခါတစ်ဦးကအကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်သာ Apple Pay ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် - အစစ်အမှန်ပိုင်ရှင်အသုံးပြုတဲ့အခါအချို့တို့ကသာလုပျဆောငျသငျ့သော.
သို့သော်, ခိုးယူ၏ ID ကိုအသုံးပြုပြီးလိမ်လည်မှုမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ဝေးပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါနားလည်, စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုပြီးသားသန်းပေါင်းများစွာသို့အပြေးနှင့်အတူ, စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရင်းမြစ်အရသိရသည်. ဒါကအမေရိကန်စမတ်ဖုန်း-based လက်လီငွေပေးချေမှုများအတွက်အကြောင်းကို $ 5bn ၏မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးကယခုနှစ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်.
Apple ရဲ့ န်ဆောင်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုစာမကျြနှာ ကပြောပါတယ်: "သင်က Apple Pay ကိုမှခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ... Apple ကစာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာပို့လွှတ်, သင့်ရဲ့ iTunes ကအကောင့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ device ကိုအကြောင်းအခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ (ထိုကဲ့သို့သောသင့်ကိရိယာ၏နာမကိုအမှီအဖြစ်, ၎င်း၏လက်ရှိတည်နေရာ, သို့မဟုတ်သင် iTunes ကိုအတွင်းအရောင်းအတစ်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါက) သင့်ရဲ့ဘဏ်. ဤအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း, သင့်ရဲ့ဘဏ် Apple Pay ကိုရန်သင်၏ကဒ်ကိုဖြည့်စွက်အတည်ပြုပေးရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မည်။ "
အမေရိကန်ဘဏ်တွေသူတို့ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုဖြောင့်ကွယ်ပျောက်အတည်ပြုကတ်များအတွက် "အစိမ်းရောင်အလမ်းကို" ကိုအသုံးပြုနေ, နှင့်ပိုပြီးစစ်ဆေးမှုများလိုအပ်ကတ်များများအတွက် "အဝါရောင်လမ်းကြောင်း". ဒါပေမဲ့တချို့ဘဏ်တွေဟာသူတို့ရဲ့လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဂဏန်းလေးလုံးနှင့်အတူသူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရန်ခေါ်ဆိုတောင်း task ကိုအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ရာ၌ခန့်ထားပြီ (SSN).
အဓိပ်ပာလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သော်လည်း, SSNs လေ့သူခိုးတွေအတွက်ခိုးယူကြသည်, နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 11.5 သန်းအမေရိကန်တွေကိုနှစ်စဉ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလိမ်လည်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြ, အမေရိကန်ဒေတာအရသိရသည်, ပျမ်းမျှအဖြစ်အပျက်ကုန်ကျနှင့်အတူ $4,930. တွင် 2013 US မှာ ID ကိုလိမ်လည်မှုမှစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု $ 24.7bn စုစုပေါင်း. ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏နီးပါးသုံးပုံနှစ်ပုံခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတျပါဝငျသ.
"ဤအချက်မှာ, တိုင်းထုတ်ပြန်သူ [ကမ်း] Apple Pay ကိုအတွက်ဖောက်သည်အကောင့်အာဏာသိမ်းမှုကနေတဆင့်သိသာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောယာယီနေရာချထားမှုကိုလိမ်လည်မှုကိုမြင်ခဲ့ပြီ,"Cherian အာဗြဟံကိုပြောပါတယ်, အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားတစ်ဦးအကြံပေးသောသူသည်မိုဘိုင်း-ငွေပေးချေမှုအထူးကု, သူ့ဘလော့ပေါ်.
သူကစနစ်တကျဂိုဏ်းအ scam များနဲ့နောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်: "အချို့သောကိစ္စများတွင်, fraudsters အတောင်းဆိုနေကြပါတယ် [ဘဏ်ဖွင့်] လိမ်လည်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုငွေပေးငွေယူကွဲလွဲချက်များကိုရှာဖွေနိုင်အောင် '' မြို့ထဲကခရီးစဉ်မှသူတို့ကိုသတိပေး 'ဖို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုဗဟိုမခေါ် (ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်တစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်နှင့်မိုင်ယာမီအတွက်လုပ်ဆောင်အဖြစ်) တက် trip ပါဘူး [အဖြစ်] လိမ်လည်လှည်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ။ "
Related: Samsung ကမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုက Apple Pay ကိုအပေါ်ကိုယူကုမ္ပဏီ LoopPay ဝယ်ယူ
Apple Pay ကို, အောက်တိုဘာလအတွက်မိတ်ဆက် 2014 အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်6နှင့်6Plus အားဖုန်းများပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိ, အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးမှာ NFC-တပ်ဆင်ထားငွေပေးချေမှု terminal ကိုအနီးကသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုကိုင်ထားသဖြင့်ပေးဆောင်ထို့နောက် iPhone ရဲ့ built-in လက်ဗွေစာဖတ်သူကိုနှင့်အတူသူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ, JP Morgan Chase တစ်ခုထက် ပို. သန်းဖောက်သည် Apple ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမှငွေထုတ်နှင့်ချေးငွေကတ်များဆက်ပြောသည်ခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူခေါ်ဆိုခအပေါ်ကပြောပါတယ်, အမေရိကတိုက်၏ဘဏ်မှယခင်ကပြောကြားခဲ့သည်စဉ် 800,000 လူ 1.1m ကတ်များဆက်ပြောသည်ခဲ့ အဆုံး 2014 - နီးပါးဆက်ဆက်က US မှာမြင်သာထင်သာမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအောင်, အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ် Google Wallet က, အရာ အတွက်စတင် 2011. ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, ပိုက်ဆံအိတ် NFC ကိုဆိပ်ကမ်း၏မရှိခြင်းနှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေး interface ကိုမှမှုကြောင့်အလွန်နိမ့်ငွေပေးငွေယူ volumes ကိုရှိခဲ့ပါတယ်, လက်လီကျွမ်းကျင်သူများကဆိုရ. Google က Google Wallet ကထိုသို့ရှိပါတယ်မည်မျှအသုံးပြုသူများအပေါ်မည်သည့်ဒေတာများထောက်ပံ့ပေးမထားပါဘူး.
"Apple Pay ကိုအလွန်အမင်းလုံခြုံဖြစ်နှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်,"ဟုအဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်. "setup ကို Apple Pay ကိုစဉ်အတွင်းထို့နောက်ကဒ်ကို Apple Pay ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်နှင့်အတည်ပြုလိုက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းကဒ်နှင့်ဘဏ်အတည်ပြုရန်ဘဏ်များလိုအပ်ပါတယ်. ဘဏ်များအမြဲသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက် process ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တိုးတက်လာနေကြပါတယ်, သောကဘဏ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ "
ဂါးဒီးယန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ Apple Pay ကိုဆက်ကပ်သောအမေရိကန်ဘဏ်များ၏အဘယ်သူမျှမလိမ်လည်မှု၏အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးရန်မယ်လို့.
သို့သော်ထိုသို့အမေရိကန်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကတ်များထည့်သွင်းမီကလူမျိုး '' အထောက်အထားတွေကိုအတည်ပြုရန်ဖို့ပိုအားကောင်းတဲ့နည်းလမ်းများရှာကြသည်ကိုနားလည်ကြသည်. အာဗြဟံသည်သတိပေး: "လိမ်လည်မှုအကြေး - ခေါ်ဆိုခစင်တာများကိုမကျင့်. မမြင်ရတဲ့ဒါပေမဲ့လုံခြုံကြောင်းတစ် automated process ကိုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်. အမှန်အတိုင်းလက်ခံထဲမှာ Apple ကိုပိုကောင်းပွုပါပွီနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကပြဿနာမျှော်လင့်ခဲ့, ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေလုပ် [ခေါ်ရန်] နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန် '' အဝါရောင်လမ်းကြောင်းကို '' တည်ဆောက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ "
တိ Sloan, မက်ဆာချူးဆက်အခြေစိုက်ဘဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံ Mercator Group မှာငွေပေးချေမှုကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ကပြောပါတယ်: "ဒီဖြစ်နိုင်မယ့်အချို့သောအံသွားပြဿနာတွေရှိပါတယ်. ဘဏ်တွေကို authentication ကိုချသံနှင့်ရိုက်နိုင်လျှင်, သူတို့က Apple Pay ကိုအပေါ်လျော့နည်းလိမ်လည်မှုမြင်ရပါလိမ့်မယ်,"နှင့် ADDED: "တိုက်ပွဲကိုသင်ရန်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်သည်အထိအစဉ်အမြဲကြီးစွာကြည့်ရှုစီစဉ်နေသည်။ "
Dave Birch, တစ်ဦးကိုဗြိတိန်အခြေစိုက်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ, ဂါးဒီးယန်းကပြောပါတယ်: "ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်နိုင်မယ့် '' စိမ်းလန်းသောလမ်းကြောင်းကို '' ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်" - လူကဤနေရာတွင်မိတ်ဆက်သည်တစ်ချိန်က Apple Pay ကိုမှမဆိုကဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကသူတို့ရဲ့ဘဏ်ခေါ်ပါရန်ရှိသည်မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်.
အမေရိကန်လုံခြုံလက်လီငွေပေးချေမှုစနစ်များနှင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု၎င်း၏မွေးစား၌ကမ္ဘာအများကြီးနောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်. "Chip များနှင့်ပင်" စနစ်တွေ, နှစ်ပေါင်းဥရောပတလျှောက်လုံးအသုံးပြု, သာဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း US မှာမသင်မနေရဖြစ်လာလိမ့်မည်. လက်လီအရောင်းဆိုင်များဟောင်းသံလိုက်အစင်းစနစ်များကိုအစားထိုးအဖြစ်, ကျယ်ပြန့်လိမ်လည်မှုမှအားနည်းချက်ခဲ့ကြရာ, အသစ်သူတွေနဲ့အတူ, သူတို့လည်း NFC ကိုစွမ်းရည်များထည့်သွင်းနေကြတယ်, ပြီးသားကမာကတ်များအဘို့နှင့်များစွာသောစျေးဆိုင်အတွင်းဗြိတိန်တွင်အသုံးပြု.
အာဗြဟံသည်ပြောပါတယ်: "Apple Pay ကိုအတွက်လိမ်လည်မှု ... အပေါင်းတို့အားတစ်ဦးအံ့အားသင့်အဖြစ်ရောက် လာ. ", အလွန်အကျွံယုံကြည်မှု on-device ကိုလုံခြုံရေးအတွက်ထားခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်း: "ဒီအပျော့အားနည်းချက်တွေဖြစ်သက်သေပြ [ထို] ကဒ်များယာယီနေရာချထားမှုကို ".